winko November 21, 2012 - 4:58 pm ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက လူတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေလောက်ကတည်းက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေဆီကို တရားဝင် ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင် ဖြစ်စေ သွားရောက်ပြီး အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့်ကို လိမ်လည်လျှောက်ထားပြီး ရယူနေခဲ့ကြပါတယ်။
Reply mr TM November 21, 2012 - 7:47 pm ဘာကြောင့်ဘင်ဂလားသေ့စ်နိုင်ငံကိုအပြစ်ရှာနေတာလဲဗမာတွေလဲအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုဘဲလိမ်ပြီနိုင်ငံသားလျှောက်နေတာဘဲယိုးဒယားမှာဆိုရင်ပိုဆိုးပေါ့မြန်မာပြည်ကတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ၁၀ နှစ်ကတ်ရဘို့အတွက်ဘတ်ငွေ ၂သောင်းကနေ ၃သောင်းအထိပေးပြီနေထိုင်ခွင့်ရအောင်လုပ်နေကြတာဘဲကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူ တည်တာဘဲ၊ကိုယ်ကိုတိုင်လဲဂျာမနီမှာဒီလိုဘဲနေထိုင်ခွင့်နဲ့နေတော့ဒီဇာတ်လမ်းကိုရေးနိုင် တာပေါ့၊ကရင်ဒုက္ဒသယ်တွေနံမယ်ခံပြီးအနောက်တိုင်းကိုရောက်သွားတဲ့ဗမာတွေအများ ကြီးရှိပါတယ်၊ကိုယ့်မျက်စိကမျက်ချီးတွေကိုအရင်ဆေးလိုက်ပါအုံး၊မျက်စိရှင်းသွားရင်လော ကကြီးလှပလာပါလိမ့မယ်။
Reply than oo November 21, 2012 - 10:58 pm To Mr TM,
Reply သိဒ္ဓိမောင် November 22, 2012 - 3:08 am ဘင်္ဂလားအကြောင်းပြောနေတဲ့သူတွေ ဘင်္ဂလားကိုရောရောက်ဖူးလို့လား၊ ဘင်္ဂလားဘက်ကနာနေရအောင် ဘင်္ဂလားအကြောင်းဘယ်လောက်သိလို့လဲ၊ စားစရာမရှိရတဲ့အထဲ ကလေးတွေတပြုံကြီးမွေး၊ မိန်းမတွေ ယူ သားဖေါက်လုပ်ငန်းလုပ်နေသလားမှတ်ရတယ်၊သွားကြည့်လိုက်ပါ၊ရောက်ဖူးအောင်၊လေ့လာရအောင်ပေါ့၊အနာဂတ်ဆိုတာဘာမှန်းမသိပဲ အခုလည်းလောက်ငှအောင်မကျွေးနိုင်၊အဲတာကို ကလေးတွေ မွေးထားတာ အများကြီး၊ မိန်းမက ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားသေးတယ်၊ မွေးထားတဲ့ကလေးတွေအရွယ်ရောက်ရင် သူများနိုင်ငံထဲခိုးဝင်ခိုင်းမယ့်အနာဂတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်၊သားသမီးပညာရေး အနာဂတ်ရေရှည်ကောင်းမွန်စွာ၊လူတန်းစေ့စွာရပ်တည်ရေးအတွက်စဉ်းစားရင် အဲလိုမိသားစုမှာ ကလေး၂ယောက်ထက်၊ မိန်းမ၁ယောက်ထက် ပိုရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူး၊အဲလိုမိသားစုတွေ များလို့ population က သန်း၂၀၀ ကျော်နေတာ…. ၊တိုင်းပြည်က သေးသေးလေး၊ ပီးတော့နိုင်ငံတကာကို လက်ဖြန့်တောင်းနေရတာ၊အဲတာ ဘင်္ဂလားအကြောင်းတစေ့တစောင်းပါပဲ…ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။ပြောရမယ်ဆို ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး ။ဘင်္ဂလားဘက်ကနာနေရင် အဲနိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေတာတွေကို အလုပ်အကျွေးသွားပြုလိုက်ပါ၊လက်တွေ့ကျကျကူညီလို့ရတာပေါ့။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 22, 2012 - 3:54 am တခြားနိုင်ငံတွေမှာ နေခွင့်တောင်းထားတဲ့ မြန်မာပြည်က လူတွေက အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်။ အဲသည်တိုင်းပြည်မှာ နေခွင့် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပဲ တောင်းတယ်။ တိုင်းရင်းသား မတောင်းဘူး။ နယ်မြေ မတောင်းဘူး။ နောက်နောင်မှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းပြီး နိုင်ငံငယ် ခွဲထုတ်သွားမှာ မစိုးရိမ်ရဘူး။ အိမ်ရှင်နိုင်ငံသားတွေကို လည်လှီး မသတ်ဘူး၊ မုဒိန်း မကျင့်ဘူး၊ အိမ်တွေ မီးမရှို့ဘူး။ အေးအေးဆေးဆေး အလုပ်လုပ်၊ ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်ရှာစားနေတာတွေ။
Reply mg mg u November 22, 2012 - 4:47 pm Mr.TM, just use common sense , Bangladesh has been facing population explosion, there is no place left to live on and to plant on. Bangladesh can not feed her all mouths.Bg is facing serious population problem. The whole world know this. The country can not support her people any longer, and her government aware of it. So, people look for any where to go, and the government let them.Because Bangladesh government knows there will be all possible serious problem in near future . I know this , because i lived there.
Reply Mr. M November 27, 2012 - 5:38 pm I agree with mg mg u.
Reply မင်းကြီးညို November 23, 2012 - 12:23 am mr TM ကို သဘောမတွေ့ဘူး။ ခင်ဗျားဟာ သတင်း ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့အာဘော် စသည်